Maitiro ekuzvidza zvikamu muLinux? | Linux Vakapindwa muropa
Darkcrizt | | Sisitimu Yekutonga
Kupfuuridza nguva masisitimu edu anowanzoita zvishoma zvishoma uye izvi zvakanyanya nekuda kwehuwandu hweruzivo rwaunobata. Ruzivo urwu rwakachengetwa mukati memabhuroko ayo kana isu patinoda kuiwana iyo diski musoro inofanirwa kunongedzera kune chimwe chinzvimbo, ikozvino ndipo panopinda nyaya yekuzvidzwa
Kuparadzaniswa ndiyo nzira iri nyore nemafaira akarongwa pane diski kuitira kuti zvidimbu zveumwe neumwe wavo zvisakosheswe, nenzira yekuti iyo faira iri kuumbika uye isina nzvimbo mukati mayo.
Chaizvoizvo iyo system inoraira uye ine mepu yechinzvimbo chemafaira ekugadzirisa mashandiro edhisiki.
Vazhinji vanofunga kuti izvi hazvina basa kumaSSD sezvo vasina chakafanana nenzira iyo maHDD anoverenga nekunyora dhata.
Kune chero eaya kesi, kudzvinyirirwa kunokosha, kunyangwe iwe ukashandisa SDD, kana iwe usingafunge kuti ndizvo zvazviri, ini ndinokurudzira kutsvaga rumwe ruzivo rwakawanda rwekuti ungagadzirise sei uye uite mabasa ekudzivirira kuti uvandudze kushandiswa kweSDD yako.
Kunyange zvakadaro vazhinji vanoti Linux mafaira masisitimu, kunyanya izvo zvinoenderana neshanduro dzakawedzerwa kana mamwe masisitimu enhau akadai seJFS, ZFS, XFS kana ReiserFS, ivo havadi kudzikiswa, chokwadi ndechekuti, kupfuuridza nguva, kushanda kwayo kunoguma kuchinonoka nekuda kwekupararira kwedata.
Kunyangwe hazvo kukanganiswa kweichi kusati kwamboita kunoshamisa senge paFAT uye NTFS yakavakirwa masisitimu, icho chinhu chatinogona kugadzirisa zviri nyore pachirongwa, kana tikashandisa chishandiso senge e4defrag.
Ndokusaka, kana iwe usingagutsikane nekuita kwePC yako diski uye uchida kuvandudza kutendeka kwayo, tinogona kuita kuderedzwa kwedisiki redu muLinux nenzira yakapusa.
Uchishandisa iyo e2fsprogs chishandiso chekubvisa
E4defrag chishandiso chinowanikwa pane akawanda maLinux kugovera, kusanganisira Ubuntu, mukati meiyo e2fsprogs package.
Kune mamwe akawanda maturusi anoshanda nenzira yakafanana, asi e4defrag iri nyore kushandisa.
Kuti uite basa rekuparadzanisa zvikamu muLinux, zvinofanirwa kuisa iyo E4defrag chishandiso. Ichi chishandiso chinowanikwa munzvimbo zhinji dzeLinux, saka kuti umise, ingo tsvaga neyaunofarira software maneja kana kuitsvaga mune iyo terminal mune zvinyorwa zvekugovera kwako.
Kana iri Debian, Ubuntu uye zvigadzirwa zvatinoisa e2fsprogs nemurairo uyu
Kana iri Fedora, yakavhurikaSUSE, CenOS uye zvigadzirwa zvatinoisa nazvo:
Kana iri Arch Linux uye zvigadzirwa zvatinoisa nazvo:
Kana kumisikidza kwapera tinogona kushandisa chishandiso kuti uishandise, zvakakosha kuratidza kuti zvinokurudzirwa kubvarura zvishandiso kana madhiraivha kubva kune yako system uko kwaunoshandisa ichi chinoshandiswa kana chimwe chinhu chakafanana kudzivirira dhata huori.
Kuti ushandise chishandiso, isu tinofanirwa kuvhura terminal uye titevere inotevera rairo:
Nekuda kweizvozvo, isu tinowana mufananidzo unoratidza kukosha kwekuparadzaniswa kweyuniti.
Kana nhamba iyi ikasvika pachikwata chakakwirira kupfuura makumi matatu, zvinokurudzirwa kuyedza kudzikisira nerubatsiro rweE30defrag, nepo ikapfuura kukosha kwemakumi matanhatu, zvichave zvakakodzera kuti uite nekukurumidza sezvazvinogona.
Kusvibisa dhiraivha, mhanyisa iyo application neinotevera kuraira kutsiva / nzira / ye / partition ine zita rekuparadzanisa
O tsime, kana iwe uchida kuita maitiro pane ese mudziyo chinja "Mudziyo" unonzi zita remuchina unodikanwa:
Isu tinongofanirwa kumirira kuti chikamu chedu kana chinhu chinoburitswa zvinobudirira, iyo nguva yainotora yeizvi inoenderana zvakanyanya nehukuru hwechikamu chako kana dhisiki pamwe nehuwandu hweruzivo hwauinazvo pavari.
Pasina zvimwe, kana iwe uchiziva chero chimwe chishandiso chekukanganisa kudhiraivha muLinux, usazeze kuigovana nesu mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekuzvidza zvikamu muLinux?
Ini ndinofunga kuti mumutemo wekutanga, $ sudo e4defrag -c, tinoda kuwedzera paramende kwazviri kuti ishande, vg $ sudo e4defrag -c /
MuLinux, neiyo ext4 faira sisitimu, zvakafanira kuzvishora sekuva neantivirus, kunze kwekunge iwe uine server ine yakawanda traffic, nekuti desktop mushandisi defragmentation haina basa, nekuti iyo system isingawanzoitika kuti inopfuura 1% kupatsanurwa, ini ndine ubuntu ndakaisirwa kubva mushanduro 14.04, ndanga ndichivandudza kusvikira zvino, ndine 18.04, yashandiswa kwemakore mana uye kupatsanurwa kuri 4%. , Ndinoreva NULL.
Sekuda kuziva chinyorwa chakanaka, asi ndinodzokorora kuti hazvina basa kuti uzviite pakombuta yako uye kuti iwe unogona kuzviita kana iwe uchinetseka asi komputa yako haizokurumidze uye hapana chinochinja zvakawanda.
Mhoroi, chirevo changu hachina kuoneka, saka ndinochidzokorora.
Ini ndiri maneja maneja mune imwe nzvimbo iyo makomputa ese anoshandisa linux, mazhinji acho akaiswa kubvira 2007 uye akagadziridzwa pamusoro pemakore kuenda kuvatsva vhezheni ye linux kernel. Hapana mamiriro, akambove akafanirwa kudzikisira ma disks, hapana kupatsanurana chero, isingasviki 1% muzviitiko zvakawanda.
Haisi chokwadi kuti nekufamba kwenguva vanoenda vachinonoka, vanoenda zvakafanana neyakagara, hapana mutsauko.
Uye zvakare, nemaSDD disks zvakatonyanya kudikanwa kuabvisa, pane zvinopesana, zvinokuvadza kuzvidzora nekuti zvinoderedza nguva yehupenyu yediski.
Icho chekuzvidzivirira ma disks chimwe chinhu chepfungwa chakatorerwa kubva kuWindows.
Ini ndakangotarisa mamwe ma disks, zvisina mutsindo, uye mune zvese zviitiko kupatsanurwa kuri 0 (zero).
Uye aya ari ma disks akaiswa, sezvandambotaura kare, muna 2007
Yakazara / akanakisa ekuwedzera 56635/55481
Avhareji saizi padanho 1821 KB
Chikamu chekuparadzanisa 0
[0-30 hapana dambudziko: 31-55 zvishoma zvakapatsanurwa: 56- inoda kuzvitutumadza]
Ichi chishandiso (/ mnt / wd1tb /) hachidi kudzikisirwa.
Ini ndinotenda kuti urikutsvaga kururamiswa mukudzora nekuunganidza zvirongwa zvinotanga nehurongwa, pamwe nekusaita kuchenesa nguva nenguva kwemafaira enguva pfupi, kuti izvi zvinokurudzira makomputa kuti ave nemawindows, linux kana osx uye kuti haina kunyanya mukati linux kana osx nekuda kwekuparadzaniswa asi kune akawanda uye akawanda mapurogiramu anodya gondohwe neruzivo rwakawanda rwakachengetwa padhisiki, kune chero eaya maOS maviri anoita kuchenesa nguva nenguva kwezvirongwa zvekutanga uye mafaera echinguvana uye uchava nawo vachishanda seachangobva kuiswa, ku windows kwete nekuti iyi OS kana ichiparadzira iyo data pese pane hard drive saka inopedzisira yatsvaga zvidimbu zvese pamusoro payo, ikozvino sezvo iri iro mukana wekushandisa SSD disks mumahwindo dambudziko rekuparadzaniswa rakadzikiswa nekuti kutsvaga hakusi kwemishini mune zvetsika zvakaoma zvinotyaira.